Iindaba zakutshanje zaseNigeria kunye nokuNgaphaya: u-Williams Uchemba uzalisekisa isithembiso
WI-illiams Uchemba izalisekisa isithembiso kwintsapho engenamalungelo, uTrump usongela ukuvala imithombo yeendaba zentlalo, i-NFF yandisa inkontileka kaRohr. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla. Nayijeriya.
1. ENigeria: U-Williams Uchemba ubonelela ngendawo yokuhlala kunye nemfundo yokuhlala usapho phantsi komnxeba we-telecom
Williams Uchemba usifezekisile isithembiso awasenza kusapho oluhlala phantsi komnxeba we-telecom ngokunika indawo yokuhlala kunye nemfundo yabantwana babo. U-Williams Uchemba othe kwiiveki ezidlulileyo wenza isithembiso sokunceda usapho lwamantombazana amabini ahlala phantsi kwesidanga waya ku-Instagram ngoLwesine we-21 ka-2020, apho abelana ngevidiyo yendlu entsha ayifumanele usapho. iindaba zakutshanje zaseNigeria
Usapho olungenalo nofifi lokuba kukho ekhayeni labo elitsha bagcwala luvuyo xa u-Uchemba wabanika izitshixo zendlela kule ndlu intsha. Ukwabhengeza ukuba iintombi ziya kufunda ngokupheleleyo de zigqibe imfundo yamabanga aphezulu.
Ngelixa usapho lwalusaqhubeka ukubhiyozela indlu kunye nezipho zokufunda, u-Uchemba wanikezela ngetshekhi ye-₦ 1M kwisibini sokuqala ishishini lezothutho.
2. IGhana: I-2 MP, abasebenzi abali-13 ngokwenene bavavanye ukuba banayo i-COVID-19
Umbhexeshi oyiNtloko weLizwe elincinci ePalamente, Alhaji Mohammed Mubarak Muntaka Uveze ukuba abantu ababini basePalamente kunye nabali-13 kwiPalamente yaseGhana ukuza kuthi ga ngoku bavavanye ukuba banaso isifo se-coronavirus.
Ethetha kudliwanondlebe kumabonakude kwiAccra esekwe kwiJoy Prime ngolwesithathu, uWhiphu oyintloko kwiPalamente, u-Alhaji Mohammed Mubarak Muntaka naye Ucacise ukuba ii-MP kunye nabasebenzi abosulelekileyo baye babekwa bodwa ngelixa uqhelaniso lokunxibelelana luqalisile. Iindaba zaseGhana zamva nje
3. UMzantsi Afrika: Ukuvalwa kwecuba kuzokubona uRamaphosa noDlamini-Zuma kwinkundla nge-9 kaJuni
UDlamini-Zuma noCyril Ramaphosa
Isimangalo esisemthethweni se-Fair Trade Independent Tobacco Association's (FITA) esisemthethweni sokuba urhulumente abeke impikiswano ngokuchasene nokutshaya kwakhe ugwayi oluzayo kulindeleke ukuba umamele kwiNkundla ePhakamileyo kwiveki ye-9 kaJuni ka-2020.
Olu hlaziyo lwamva nje olwenziwe yi-FITA ngolwesiThathu ngolwesiThathu liza emva kokuba urhulumente ehambisene nomyalelo wenkundla - nangona ebechithe iiyure ezimbalwa ngaphaya komhla wokugqibela - kwaye ehambise amaxwebhu achaza into yokuthengisa kukaRhulumente weCoronavirus Command Council (NCCC) malunga nomba wentengiso yecuba ngexesha lokuvalwa .
La maxwebhu apapashiwe ngumenzi-sicelo, i-FITA edwelise uMongameli weRiphabhlikhi yaseMzantsi Afrika, UCyril Ramaphosa noMphathiswa woLawulo lweNtsebenziswano neMicimbi yezeMveli, Usihlalo wemanyani yaseAfrika njengabaphenduli abaphambili - kulindeleke ukuba baveze imizuzu yentlanganiso ye-NCCC eyayixhasa ekuqaleni, kodwa kamva yabhukuqa, ukuthengiswa kwecuba ngexesha lokuhamba kwinqanaba lokuvalwa kwe-4.
4. UTrump usoyikise imithombo yeendaba zentlalo emva kokuba eyi-net-etyeni yakhe
Mongameli waseMerika uDonald Trump ngolwesiThathu asongele iinkampani zemidiya yoluntu ngommiselo omtsha okanye azivalele emva kosuku emva kokuba iTwitter yongeze iitshekhi ezimbini kwi-tweets zakhe.
Umongameli akakwazi kulawula ngokunganyanzelekanga okanye avale iinkampani, eziza kufuna inyathelo yiKhomishini yase-US okanye iKhomishini yoNxibelelwano yaseburhulumenteni (iFCC). Kodwa oko akuyekanga uTrump ekubeni akhuphe isilumkiso esiqatha.
Ibango lemidiza yobugcisa ethe cwaka ngamazwi olondolozo, uTito kuTouch, "Siza kulawula ngokungqongqo, okanye sivale ngaphambi kokuba sikuvumele oko kwenzeke."
5. I-NFF yandisa ikhontrakthi kaRohr njengomqeqeshi weSuper Eagles
I-Federation yaseNigeria yeNdebe iyandisile isivumelwano Gernot Rohr njengomqeqeshi weSuper Eagles. Umongameli weNF, u-Amaju Pinnick, ukwazisile oku ngoLwesithathu ngaphandle kokunika zinkcukacha zesivumelwano.
Kwaxelwa ukuba ikhontrakthi kaRohr ibangelwa kukuphelelwa yisikhathi ngoJuni kwaye uthethathethwano sele luqhubeka iinyanga.
Amaju Pinnick Uvakalise ithemba lokuba ukugqitywa kwemvumelwano kuya kwenza ukuba umqeqeshi agxile ekuphuhliseni ibhola kweli lizwe.
IVeki yeendaba yethu yoSuku lweeVeki ikulethela isishwankathelo sezihloko ezintlanu ezishushu namhlanje eziquka iindaba zakutshanje eNigeria, iindaba zaseAfrika, iindaba zezopolitiko, iindaba zamazwe aphesheya, iindaba zeHollywood, iindaba zemidlalo kunye neendaba zabantu abadumileyo baseNigeria nabadumileyo baseAfrika. Kwakhona, lindela amanye amabali aphezulu kunye nezinye iindaba ezihambahambayo zakutshanje namhlanje eSahara. Isishwankathelo seendaba zamva nje zaseNigeria namhlanje ngo-2020. Iindaba zakutshanje zaseNigeria
Uhlobo Rave Ngamana 27, 2020